QAJAARKA SIBERIYA: SHARAXAADA NOOCYADA UGU WANAAGSAN - BEER CAGAARAN
Ka hor inta aadan iibsan baakad kale oo leh abuurka qajaarka ee qajaarka, waxaad u baahan tahay inaad si taxaddar leh u barto sifooyinka noocyo gaar ah.
Ka dib oo dhan, ma baadiyaha kasta oo awood u leh inay u adkeeyaan cimilada Siberian aan raaxo lahayn.
Sida qajaarka, dhaqankan wuxuu jecel yahay iftiin iyo kuleyl aad u badan.
Hase yeeshee tarbiyada casriga ah ayaa si degdeg ah horay usii mariyay in tiro badan oo noocyo ah oo ka mid ah wakiilkan qoyskooda boodhka hore loo abuuray, taas oo adkeyn karta isbeddelka xaaladaha cimilada xitaa aagga sida Siberia.
Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad abuurto kaliya cadaadis u adkaysta iyo aan qabyo ahayn, qajaarka, ka dibna noocyo kuwan ayaa ku haboon.
Kala sooc "Altai"
Kala duwanaanshahan waxaa si ballaaran loo ogaadaa inuu yahay beeraley Siberian sababtoo ah daryeelkiisa aan la qabin iyo iska caabinta isbeddelka cimilada. "Altai" waa noocyo hore u bislaaday oo kordhay 35 ilaa 38 maalmood. Waxay u mahadcelineysaa shinni ah in lagu sumoobo ubaxyada duurka, ayuu kala jajabay.
Bannaanka u kora dhulka iyo koriyo. Qeybaha kala duwan ee noocaan ah waa mid dhexdhexaad ah, illaa 1.2 m dhererkeedu yahay 1.2 m dhirta dhexdhexaad ah Midhaha dhexdhexaad ah (qiyaastii 9-10 cm), waxay heleysaa 85 illaa 90 g miisaanka, qaabka cilindhafka caadiga ah, cagaarka dhalaalaya, dhadhan fiican leh qadhaadh. Qoyaanka qajaarkan waxaa lagu daboolaa tubercles, talooyinka ay leeyihiin midab cad.
Xayawaanku waxay ogyihiin in kala duwanaanshahani uu si fiican u soo bandhigay caanaha, maadaama qajaarkan la soo saari karaa bangiyada yaryar. Sidoo kale, mirahaasi waxay ku dari karaan cuntada caanaha oo cusub.
Kala duwan tani waxay u adkaysaa cudurada ugu caansan ee qajaar. Yield waa qiyaastii 5 - 6 kg halkii mitir labajibbaaran.
Xaaladaha cimilada ee Siberia, waa wax aan loo baahnayn in lagu beero abuurka isla markiiba dhulka, xataa haddii lagu beeray aqalka dhirta lagu koriyo.
Sidaa darteed, abuurka bookmark waxaa la samayn karaa laga bilaabo horraantii Abriil ilaa horraantii May. Qodobka dhererka waa inuu ahaado qiyaastii 1.5-2 cm Heerkulka hawada kaas oo miraha lagu balan qaadayo in uu Gagaashu noqdo qiyaastii 23-25 ​​° C.
Sidoo kale, geedo waa in la waraabiyaa oo la quudiyo. Markaad ku shubtid dhulka dhulka 1 dabaq ah. mitir waa prikopat aan ka yareyn 3 geedo. Sidoo kale abuurka ayaa ka faa'iideysan doona isticmaalka kor u qaadayaasha kobcaya. Si arrintan loo sameeyo, waxaad iibsan kartaa daroogo kasta oo ku haboon ujeedadaas oo isticmaal marka loo eego tilmaamaha.
Maaddaama kala duwanaanta noocaas ah ay adag tahay oo aan qabyo ahayn, waxay ku adkeyn doontaa qashinka yar, tusaale ahaan, waraabinta. Biyaha ay duurka u socdaan biyo diiran toddobaadkii hal mar. Xaqiiji inaad yeelatid dabacsan oo dabiiciga ah ee ciidda, si aanay u sameynin qolof, kaas oo faragelin doona xididada "neefta."
Filimada Polyethylene ama cows ayaa loo isticmaali karaa mulch. Straw, dabcan, waa ka fiican, maadaama this wax organic noocan ma abuuri doono saameyn ku leh koritaanka joogto ah, sida filim samayn lahaa. Iyada oo ay saameyn ku yeelanayso microclimate sida, xididdadu waxay si fudud u bilaabi kartaa kallana ay sabab u tahay kondhino xad-dhaaf ah. Cawsku wuxuu si tartiib tartiib ah u jajabinayaa isla markaana wuxuu noqon doonaa bacriminta dabiiciga ah ee cajiibka ah.
Waxaa sidoo kale muhiim ah in lagu daweeyo dhirta leh fungicides marka calaamadaha ugu horreeya ee cudurka muuqda.
Kala duwan "Miranda"
Hirgelinta barafka hore ee udubdhexaadka ujeedada guud. Qaado xidid kasta oo ciid ah. Bushes xoog leh, oo leh tiro badan oo caleemo waaweyn, 1 - 2 ugxan-yari ayaa lagu sameeyay hal meel. Miraha size dhexdhexaad ah, 11-12 cm dhererka, culays (110-120 g), qaabka silyloom ee qaab. Duufku wuxuu ku daboolan yahay tubercles yar oo midab cad.
Midabka midhaha leh ee midhaha waa mid aad u xiiso badan - qajaar dhan waa cagaaran cagaaran oo leh tiro badan oo lafaha caddaan ah, iyo jilicsan jaalaha ah foomka ilaa dhexe ee qajaar. Jirka waa mid aad u casiir leh, macaan, oo leh caraf weyn. Ku dar dhadhan cajiib leh saladh kasta, adiguba aad u dhadhan fiican leh oo cusub, qasacad ama qasacadaysan.
Kala duwan baraf u adkaystaoo aan saameyn ku lahayn inta badan cudurrada qajaarka, oo ay ku jiraan caarada budada ah.
Waxaad u baahan tahay inaad bilowdo geedo, beerto kaas oo sida ugu wanaagsan loo sameeyo badhtamaha April. Dhamaadka dhamaadka May, geedo ayaa lagu soo deyn karaa aqalka dhirta lagu koriyo ama dhulka. Waqtigaa geedo waa inay "ku fariistaan" dhererka ugu yaraan 30 maalmood. Marka laga beerto geedo, ciidda waa in ay kululaan ilaa heerkul ah ugu yaraan 14 - 15 ̊С.
Haddii aadan qorsheyn inaad abuurto taageero duurka, ka dibna 1 dabaq ah. Meter ayaa abuuri kara geedo 3 - 4.
Haddii beeritaanka trellis loo maleeyo, ka dibna way ka fiican tahay prikopat 2 - 3 dhirta qaybta cutubka. Ciidda ee kala duwan ee kala duwan ee qajaar waa in ay ku filan bacrin ah iyo si wanaagsan udgoon. Sidaa darteed, waxaa fiican in la dalbado Bacriminta kala duwan ee dhulka ee dayrta, iyo sidoo kale in lagu daro sida balka, kaas oo gacan ka geysan doona dilaaca xoog leh ee dhulka.
Biyo diirran oo joogto ah 2-3 jeer todobaadkiiba biyo kulul ayaa muhiim ah. Haddii cimiladu ay roobab ku filan tahay, markaa xaddiga waraabinta waa in la yareeyaa si aan lahayn qoyaan dheeri ah oo lagu sameeyo ciidda. Hubi haddii dhulku u baahan yahay biyo, oo ku filan. Waxaad u baahan tahay inaad gacanta ku qabato dhulka gacantaada oo aad u tuujiso, haddii ciidku jajabiyo, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad waraabiso duurka. Haddii miyir-beelka la sameeyo, ka dibna qoyaanku waa ku filan yahay.
Sure ilaa bacrimiyakaas oo ku kobcin doona oo ku daraya ciidda leh dhammaan qaybaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka ah. Haddii baadiyaha si firfircoon u kordhiyo massbiilka, iyo miraha aan la aasaasay, ka dibna waxaad u baahan tahay in la xoqo dhirta. Markaas habka fruiting bilaabi doonaa.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan noocyadda qajaarka Shiinaha
Kala duwanaanta "Brigantine"
Waxaa laga bilaabay Siberia. Bee pollinating hybrid, oo leh muddo yar oo koritaanka (40 - 45 maalmood). Isagoon ku xoortay geedihii, branching ee heer dhexdhexaad ah, caleemaha on caleemaha sidoo kale ma aha wax aad u badan.
Caleemaha waa iyaga dhexdhexaad ah, cagaar dhalaalaya. Miraha size dhexdhexaad ah, 12-13 cm dheer, miisaankoodu wuxuu helayaa 85-95 g, qaabka cylindrical silsilad. Dusha sare waa tuberculate, dhamaadka tubercles waa caddaan. Jirka iyo adhigu waa cagaar, laakiin maqaarku wuxuu leeyahay maro cagaaran.
Dhalidda sare, qiyaastii 9 - 10 kg oo leh 1 jibbaaran. sariiraha mitirta. Cucumber kala duwan oo noocaan ah waxay leeyihiin dhadhan weyn ma aha oo kaliya cusub, laakiin sidoo kale foomka pickled ama qasacadaysan.
Abuur qoraalka ayaa u baahan in la sameeyo horraanta May. Qodobbada boggu waa heer. Daryeelka geedo waa waraabin joogto ah, bacarimiso, iyo sidoo kale qaadashada ka dib muuqaalka caleen labaad ee on biqil.
Waxaad soo celin kartaa geedo ku yaal dhulka ilaa dhammaadka May ilaa bilowga Juun. Inta u dhaxeysa sariiraha is dhisa waxaa jiri doona masaafada 50 cm. mitir ee dhulka waxaa lagu beeray karaa 3 - 4 geedo. Kadib dhammaadka qalliinka, waxaa lagugula talinayaa inaad biyaha dhulka ku daboosho oo daboolo mulch.
Haddii ay suurtagal tahay in cimiladu ay noqoto mid xun, markaa waxa fiican in lagu daboolo geedo leh polyetylin daahfuran ilaa cimilada diiran.
Daryeelka wuxuu ka kooban yahay waraabinta joogtada ah ee biyaha diirran, iyo u dhexeeya iyaga u dhexeeya waa inay ahaataa qiyaastii laba maalmood, tan kala duwanaantani waxay u baahan tahay qoyaan. Isla markii aad geedo prikopali, waxay u baahan yihiin inay ku shubaan badan oo biyo diiran, iyo ka dib markii qoyaanka si buuxda u nuugo, dhulka waa in la furo.
Waxay dhacdaa in ay duurka u yihiin qurux iyo cagaaran, laakiin ha u Bloom ama ma midho u dhali, ka dibna waxaad u baahan tahay in yar ka fuqsan caleemaha ka soo dhammaatay. Markaas miraha ayaa bilaabi doona inay muuqdaan. Si aad u soo goosatid ma niyad jabin, waxaad u baahan tahay samee bacriminta organic iyo macdantataas oo dhab ahaantii siinaysa dhirta dheeraad ah ee koritaanka iyo fruiting.
Kala sooc "Mig"
Kala duwan ee dhexe-hore, bilaabaan inay midho dhalaan at 42 - 45 maalmood ka dib soo baxa geedo. Buundooyinka waa kuwa koraya, xoog leh, awood leh, dhexdhexaad ah. Miraha waa muuqaalka qaabka, oo leh tiro yar oo tubercles ah, dhinacyadooduna waa yaraanta madow.
Dhiroonka qaali ah (12 - 20 cm), aad u culus, qiyaasta 200 ga, waxay leeyihiin dhadhan weyn. Cuntada waa 3-6 kg oo mitir labajibbaaran. mitir Ka dib markaad ka soo baxdo baadiyaha, midhaha ma daloolin muddo dheer oo xajiya midabkiisa.
Kala duwanaansho ayaa si fiican u cadeeyay ma aha oo kaliya cusub, laakiin sidoo kale caanaha iyo pickling. Muddada xilliga jimcaha waa 2 ilaa 3 bilood. Inta lagu jiro muddadan, miraha wax saameyn ah kuma yeeshaan caarada budada iyo bakteeriyada.
Beerto geedo waa in la sameeyaa badhtamaha bisha May, sidaa darteed abuurka waxaa la dhigayaa dhulka oo leh heerkul ah ugu yaraan 17 ° C, haddii kale waxay si fudud kugusi doonaan. Kala duwanaantan waa, guud ahaan, aad u nugul kulaylinta iyo qoyaankaSidaa darteed waa mid aad u muhiim ah in ay geedo kululaadaan.
Waxaa muhiim ah in la waraabiyo geedo si joogto ah si ay u leeyihiin awood ku filan iyo xajmiga jirka ka hor inta aan la beeri. Qoto dheer ee abuurku waa inay ahaataa 3 ilaa 4 cm, marka lagu beddelo 1 digrii. Meter ayaa abuuri kara geedo 3 - 4.
Waxaa muhiim ah in si taxadar leh looga ilaaliyo duurka kulaylka iyo abaarta, haddii kale waxay si fudud u dhiman doonaan. Waraabinta waa inay noqotaa mid joogto ah, waa inaysan jirin wax qas ah. Biyaha dhirta waxay u baahan yihiin biyo kulul 2 ilaa 3 maalmood oo kasta iyada oo ku xiran nooca cimiladu tahay banaanka. Waxaa lagu talinayaa in la xiro caleemaha si trellis ah si loo sameeyo habka goosashada ka sahlan.
Waxaa lagama maarmaan ah in la xoqo duurka ka hor fruiting, si ay miraha waa weyn iyo dhadhan. Waxaa muhiim ah in aan ka badin bacriminta, macdanta iyo organic.
Kala duwanaan "Cascade"
Kala duwan xilliga badhtamaha xilliga kuleylka, 45 ilaa 50 maalmood. Ubaxyada duurka waa haween. Miraha dhirta dhirta waxay u kobcisaa si siman. Miraha waxay qaabeeyaan qaab elips ah, oo leh tiro yar oo tubercles ah, oo aad u dheer (13-15 cm), waxay helayaan 90-100 g miisaanka, cagaar mugdi ah.
Bannaanka uqalmee noocyada kala duwan ee dhadhanka ma aha oo kaliya miraha cusub, laakiin sidoo kale qasacadaysan iyo pickled. Buundooyinka "Cascade" wax saameyn ah kuma yeeshaan xagta xun iyo cudurada qajaarka ee kale. Dhalidda sare, 7 - 8 kg digrii. mitir
Haddii aad leedahay aqalka dhirta kulul, waxaad ka boodi kartaa marxaladda geedo sii kordhaya. Xaalad kasta oo kale, beero abuurka waa in la sameeyaa 25 illaa 30 maalmood ka hor inta aan la beeri. Daryeelka geedo caadi ah.
Cirifka waa in la sameeyaa bilowga Maajo, marka heerkulku uu gaaro 14-15 ° C. Cufaanku wuxuu kaloo yahay mid caadi ah waana 3 - 4 geedo halkii kiilo. mitir Waxaa lagu talinayaa in la adkeeyo geedo ka hor inta laga beerto by habka maalin kasta oo hoos u dhiga iyo heerkulka sii kordhaya. Markaas duurka u dhaqso si dhakhso ah u qaadato xididka dhulka.
Wixii qajaarka, waxaa aad muhiim u ah waraabinta joogto ah iyo bacarimiso, taas oo ka ciyaara kaalinta tooska ah ee nolosha dhirta. Waraabinta waa in ay noqotaa mid joogto ah oo badan, si ay biyo u gaaro qoto dheer oo dhan biqilka xididka. U hubso in aad soo saarto caws, kaas oo si fudud u fekeraya qajaarka.
Loosinta ciidda waa in la sameeyaa si loo kordhiyo helitaanka hawada si nidaamka xididka duurka. Waxaa lagama maarmaan ah in bacrimiya sariiraha si joogto ah, iyo dhismaha oo dhan Bacriminta - laga bilaabo potassium, fosfooraska iyo nitrogen, oo ku dhamaada arrinta organic. Sidoo kale, ay duurka ku xiran karaan taageero, laakiin trellis waa inuu awood u leeyahay inuu qaado culeyska dalagga oo idil.
Sidaa darteed, doorashada noocyada saxda ah ee qorshahaaga, waxaad ma kori doontaa oo kaliya goosashada wanaagsan, laakiin sidoo kale helayaan waayo-aragnimo ah ee beerista qajaarka. Xitaa haddii aad ku nooshahay Siberia, xitaa halkaa waxaad ku kori kartaa oo keliya ubaxyadaada guriga, laakiin sidoo kale qajaarka cagaaran ee beerta. Cunto qabow!
Tiknoolajiyada "Perimeter" ama sida Faransiiska Faro-ga iyo kor u kiciso guriga
12 siyaabood oo wanaagsan: sida loo beero karootada, si aanay u dhicin?
Su'aal muhiim ah: miyuu suurtogal yahay ama ma cuni karo xididdo leh faytecoos ​​iyo caga-qabad? Muxuu yahay, maxay tahay isticmaalka iyo waxyeelada khudradda?
Taageerayaasha yaanyada casaanka ah ee casaan-jiiska ah ayaa hubaal ku raaxaysan doona yaanyo kala duwan oo yaanyo ah oo foosto ah (oo ah ilaha qaar, qoraalka Pink Claire ayaa laga heli karaa) waa dhexjeeda oo ay bixiyaan khabiiro Israeli ah. Beautiful quruxda xitaa waxaa si fiican loo kaydiyaa, ku habboon cunto karinta noocyo kala duwan oo suxuun iyo caanaha, suxuunta suunka lagu kariyo, casiirka, baradhada la shiiday. Read More
Sidee loo abuuraa "Furazolidone" for poults: waxbarashada
Hisex Brown iyo Haysex White: dabeecadaha, talooyinka ku saabsan ilaalinta iyo taranka